Virus Outbreak Dubai Tourism
In this Monday, July 6, 2020 photograph, a front desk employee wearing a mask due to the coronavirus pandemic works on his computer at the Rove City Centre Hotel in Dubai, United Arab Emirates, Monday, July 6, 2020. Dubai reopened for tourists Tuesday amid the coronavirus pandemic, hoping to reinvigorate a vital industry for this city-state before its crucial winter tourist season. (AP Photo/Jon Gambrell)
In this Monday, July 6, 2020 photograph, an employee wearing a mask due to the coronavirus pandemic prepares to serve guests coffee at the Rove City Centre Hotel in Dubai, United Arab Emirates, Monday, July 6, 2020. Dubai reopened for tourists Tuesday amid the coronavirus pandemic, hoping to reinvigorate a vital industry for this city-state before its crucial winter tourist season. (AP Photo/Jon Gambrell)
An employee wearing a mask due to the coronavirus pandemic makes coffee at the Rove City Centre Hotel in Dubai, United Arab Emirates, Monday, July 6, 2020. Dubai reopened for tourists Tuesday amid the coronavirus pandemic, hoping to reinvigorate a vital industry for this city-state before its crucial winter tourist season. (AP Photo/Jon Gambrell)
In this Monday, July 6, 2020 photograph, an employee wearing a mask due to the coronavirus pandemic fogs disinfectant in a hotel room at the Rove City Centre Hotel in Dubai, United Arab Emirates. Dubai reopened for tourists Tuesday, July 7, 2020, amid the coronavirus pandemic, hoping to reinvigorate a vital industry for this city-state before its crucial winter tourist season. (AP Photo/Jon Gambrell)
An employee wearing a mask due to the coronavirus pandemic fogs disinfectant in a hotel room at the Rove City Centre Hotel in Dubai, United Arab Emirates, Monday, July 6, 2020. Dubai reopened for tourists Tuesday amid the coronavirus pandemic, hoping to reinvigorate a vital industry for this city-state before its crucial winter tourist season. (AP Photo/Jon Gambrell)
An Emirati wearing a face mask due to the coronavirus pandemic walks past a camel statue decorated with a face mask at the Rove City Centre Hotel in Dubai, United Arab Emirates, Monday, July 6, 2020. Dubai reopened for tourists Tuesday amid the coronavirus pandemic, hoping to reinvigorate a vital industry for this city-state before its crucial winter tourist season. (AP Photo/Jon Gambrell)
A man stands in an elevator decorated with a graphic showing the video game character Pac-Man eating the coronavirus at the Rove City Centre Hotel in Dubai, United Arab Emirates, Monday, July 6, 2020. Dubai reopened for tourists Tuesday amid the coronavirus pandemic, hoping to reinvigorate a vital industry for this city-state before its crucial winter tourist season. (AP Photo/Jon Gambrell)